S: Sidee baad u damaanad qaadi kartaa Tayada Wanaagsan aan helay?
A: Waa midda koowaade, Waxaan leenahay waaxda QC xakamaynta Tayada ka qalab ceeriin ilaa waxyaabaha ku dhameysatay. Marka labaad, waxaan samayn doonaa Inpsection inta lagu guda jiro soo saarka iyo ka dib Production. Mar saddexaad, Dhammaan alaabta lagu baari doonaa ka hor inta Cabaynta iyo dirista. Waxaan soo diri doonaa Inspection ama imtixaanka video haddii macaamiisha aan socda hubinta personly.
S: Maxaa ku saabsan warrenty?
A: Dhamaan Products our isagoo 1 sano warrenty adeegga Dayactirka Life-Long. Waxaan ku siin doonaa taageero farsamo oo lacag la'aan ah.
S: Ma waxaad u bixiyaan kaalmo kasta oo ku saabsan Products Operation?
A: Dhamaan mashiinada gudahood waxyaabaha sal-dhigida, Buuggooda in English kaas oo isagoo oo dhan talooyin hawlgalka iyo soo jeedinta Dayactirka lagu jiro iyadoo la isticmaalayo. Dhanka kale, Waxa kale oo aanu kaa taageeri karaa si kale, sida ku siin Video, Show oo waxaan idin barayaa inta aad ku jirtid our warshad ama injineerada Our ee warshad haddii la codsado.
S: Sidee ayaan ku heli karaa dayactir?
A: Waxaan ku hareerayn doonnaa qaar ka mid ah qaybaha Xiro deg deg ah oo aad si, sidoo kale qaar ka mid ah qalabka looga baahan yahay mashiinka this taas oo ah lacag la'aan lagu wada soo diri doonaa wtih aad Order sanduuqa qalab. Waxaan leenahay dhammaan qaybaha ay tudhi barbaro gudahood Buugga liiska. kaliya inaad noo sheegtaa kartaa No. dayactir In mustaqbalka. Waxaan aad qaadi karin jidka oo dhan. Waxaa intaa dheer, waayo beveling Mashiinka lagu jaro qalabka qeebta iyo durayo, Waa nooc ka mid ah comsumable for mashiinada waa. Waxaa had iyo jeer ka codsan magac joogto ah oo easyly ka heli kartaa suuqa maxaliga ah adduunka oo dhan.
S: Waa maxay Your Delivery Date?
A: Waxay qaadataa 5-15 maalmood lagu daydo si joogto ah. Iyo 25-60 maalmood mashiinka kartoo.
S: Sidee ayaan ku heli karaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mishiinka ama silimars this?
A: Pls qor aad su'aalo iyo shuruudaha in si ka hooseysa sanduuqa baaritaan. Waxaan hubin doonta oo ka jawaabi aad by Email ama Phone 8 Hours.
Maalinta Qaranka iyo Dabaaldaga Dayrta-Cele ...
Macaamiisha Qaaliga ah Salaan. Waxaanan idiin rajaynayaa ugu wanaagsan oo dhan. Waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo bussiness-kaaga oo dhan. Halkan waxaa lagu ogeysiinayaa in aan geli doonno fasax laga bilaabo 1-da Oktoobar ilaa 8-da, 2020 ee loogu dabbaaldegayo Dabaal-degga Dayrta-Dhexe ...